Mitemo & Maitiro - Motio
musha 9 Terms & Conditions
Iyi Mitemo Yekushandisa ("Terms"Kana kuti"Chibvumirano”) Tonga yako ("iwe"Kana kuti"dzako”) Kushandiswa kwewebsite https://motio.com/, chero masevhisi anoitwa kana zvigadzirwa zvinopihwa kuburikidza newebsite, uye chero tsamba pakati pako ne Motio, Inc. zvine chekuita nezve zvakafanana (pamwe chete zvinonzi "Site"). Motio, Inc., mubatanidzwa weTexas ("Motio, ""We, ""Our"Kana kuti"Us”) Ndiye muridzi uye mushandisi weSiti.
Ichi chibvumirano pakati pako na Motio. Ndokumbirawo kuti muverenge Mitemo iyi zvakanaka usati washandisa kana kuwana chero zvigadzirwa, ruzivo, zvigadzirwa kana masevhisi kuburikidza neSiti. Nekuwana, kushandisa, kuwana, kana kutenga chero zvemukati, dhata, zvishandiso, ruzivo, zvigadzirwa kana masevhisi kuburikidza kana kubva kuSiti, urikuratidza kubvuma kwako kwakazara uye kwakazara uye chibvumirano chekusungwa neMitemo iyi, pasina shanduko. Kana iwe usingabvume kusungwa nechibvumirano ichi, uye / kana kana iwe uchipokana nechero ipi yematemu arimo muchibvumirano ichi, ndapota usashandise kana kuwana iyo Saiti, kana kutenga kana kushandisa chero zvigadzirwa kana masevhisi anopiwa kana kuburikidza ne Saiti.
1.0 License Yakatemerwa. Motio inokupa rezenisi rakaringana rekuwana, kuongorora uye kushandisa iyo Saiti kune yako pachako, isiri-yekutengesa kushandiswa, chero iwe uchigamuchira mirau nemamiriro akaratidzirwa muchibvumirano ichi. Zvese zvinyorwa, software, HTML kana imwe kodhi, zvinyorwa, zvinyorwa, zvigadzirwa, mifananidzo, mifananidzo, zviratidzo, marogo, mifananidzo (kusanganisira mifananidzo), odhiyo nevhidhiyo zvirimo kana kuratidzwa paSiti (pamwe chete, “gutsikana”), Inosanganisira asi isina kuganhurirwa kune dhizaini, dhizaini, dhizaini, kusarudzwa, kutaura, uye / kana kurongeka kweChinyorwa, ndezvayo chete ne Motio or MotioVamwe vedu (kubva pano, "Nhengo (s)”), Kana iri kushandiswa ne Motio nemvumo, uye inodzivirirwa neanoshanda copyright, nguo yekutengesa, patent, chiratidzo kana mutemo wepachivande wekutengeserana, uye mimwe midziyo yehungwaru nemitemo isina makwikwi yemakwikwi. Iwe haushandise, kugadzirisa, kuberekesa, kuteedzera, kuteedzera, kutengesa, kutengesa, kududzira kana kushandisa zvirimo kune chero chinangwa chekutengesa. Hapana chimwe cheChinyorwa chinogona kudzoserwa-kugadzirwa, kukatanurwa, kuparara, kunyorwa, kutengeswa, kuiswazve kana kugoverwa patsva pasina mvumo yakanyorwa yekutanga yemvumo Motio mumiriri. Kushandisa kwako kweMukati kunogumira kune imwe kopi yekuona wega, isiri-yekutengesa uye kushandisa chete, uye unobvuma kuti iwe hautore chero kodzero yemuridzi nekutora kana kuwana zvirimo.
Zviratidzo, mamaki ebasa, marogo, nguo dzekutengesa, mudziyo, dhizaini kana chero rimwe zita (iro "Trademarks”) Yakashandiswa uye yakaratidzwa paSiti ndiyo yakanyoreswa uye isina kunyoreswa maTrademark e Motio, ayo Affiliates kana mamwe mapato echitatu. Hapana chinhu paSiti chinofanirwa kutorwa sekupa, nekureva, kana neimwe nzira, chero rezinesi kana kodzero yekushandisa chero yeZviratidzo, pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa Motio kana bato rakakodzera rechitatu. Motio inorambidza kushandiswa kwechero ipi marogo ayo sechikamu chekubatanidza kuenda kana kubva kune chero webhusaiti, kunze kwekunge chinongedzo ichi chibvumidzwa pamberi Motio pakunyora. Kupfuurirazve, dhizaini uye marongero eSiti anodzivirirwa se MotioNguo dzekutengesa kana mabasa ane copyright uye anogona kunge asina kuteedzerwa kana kuteedzerwa, kuendeswazve, kuparadzirwa kana kuratidzwa, izere kana chikamu. Iwo mareferenzi kune kana kuiswa kweimwe yechitatu bato Zviratidzo paSiti ndezvekuziva chete uye hazviratidze kuti vechitatu mapato vakabvumidza iyo Saiti kana chero Chayo Chiri mukati. Sezvambotaurwa pamusoro, Chibvumirano ichi hachikupe chero kodzero yekushandisa Zviratidzo zvevamwe mapato.
2.0 Shandisa Saiti Zvakanyatsonaka. Kuti utenge kana kuwana chigadzirwa kana sevhisi inopihwa paSiti, ungangodikanwa kunyoresa uye kumisikidza account neSiti uye / kana Motio, uye gadzira rakasarudzika zita remushandisi uye password. Unogona chete kunyoresa kuti uve nhengo yeSiti kana iwe uine zera rakakodzera repamutemo uye uchigona kupinda muzvibvumirano zvinosunga. Kana iwe ukasarudza kunyoresa neSiti, unobvuma ku: gadzira account imwe chete; kupa ruzivo rwakakwana uye rwakakwana rwekunyoresa; chengetedza yako yekupinda uye account account; uye chengetedza kushandiswa kweakaundi yako nguva dzose. Iwe ndiwe wega unoita basa rekuchengetedza zvakavanzika zvemaphasiwedi ako, zvekupinda uye ruzivo rweakaundi, uye kune chero chiitiko chinoitika iwe uchinge wasainwa muaccount yako kana paunenge uchishandisa Saiti. Akaundi yako haichinjiki uye inogona kusatengeswa, kusanganiswa kana kugoverwa nemumwe munhu.
Kunyangwe iwe uchinyoresa neSiti, unobvuma kusashandisa iyo saiti chero chinangwa chisiri pamutemo, zvisiri pamutemo kana zvinorambidzwa neMitemo iyi kana pasi pemutemo. Pamusoro pezvo, unobvuma kusaita chero chinotevera pasina mvumo yakanyorwa yakanyorwa yekutanga Motio: (i) pinda iyo saiti nechero bhuku kana otomatiki maitiro kune chero chinangwa kunze kwekushandisa kwako pachako kana kwekuisirwa kwe Motio mapeji mune indekisi yekutsvaga; (ii) kutyora zvirambidzo mune chero marobhoti ekusiya misoro paSiti kana kupfuura kana kutsausa mamwe matanho anoshandiswa kudzivirira kana kudzikisira kupinda paSiti; (iii) yakadzika-chinongedzo kune chero chikamu cheSiti chero chinangwa; (iv) shandisa chero chishandiso, software kana chiitiko chinokanganisa kana kuyedza kupokana neyakajairika mashandiro eSiti kana kutora chero chiito chinomisikidza mutoro usinganzwisisike pakombuta yedu kana netiweki michina; (v) kuwana iyo Saiti nechinangwa chekuwana Motio pfuma yehungwaru yekuita nayo basa rinogona kukuvadza izvozvi kana mune ramangwana ku Motio kana marezinesi ayo; (vi) shandisa iyo Saiti kuitisa zvinangwa, kusanganisira zvekutengesa kukumbira; (vii) shandisa iyo Saiti kutora ruzivo rwunozivikanwa nezvewewechitatu bato; (viii) shandisa Saiti kutevedzera mumwe mushandisi weSiti; kana (iv) kuyedza kuwana mukana kune data risina kuitirwa iwe, semuenzaniso, pinda paaccount yausina kupihwa mvumo yekuwana kana kuwana nzvimbo dzakachengetedzeka dzeSiti iyo iwe yausina kuitirwa kuti uwane. Kana iwe ukatyora aya Mitemo, isu tinogona, panguva ipi neipi, uye mukufunga kwedu chete, pasina kufanozivisa kana chikwereti, kugumisa account yako kana kumisa kana kudzora kupinda kwako kune zvese kana chero zvikamu zveSiti ino.
3.0 Kushandiswa kweSaiti Kazhinji. Iyo Saiti inzvimbo yakavanzika uye zvese kudyidzana paSiti kana kuburikidza nehukama kubva kuSiti zvinofanirwa kuve zviri pamutemo uye kutevedzera Chibvumirano ichi. Iyo Saiti inogona kunge iine kana inosanganisira inofambidzana yepamhepo yekutaurirana sevhisi kana dzimwe nzvimbo umo iwe nevechitatu mapato munogona kushambadzira, kutumira, uye kuwana mukana kune akasiyana marudzi eruzivo paSiti ("Inopindirana Nzvimbo"). Paunenge uchishandisa kana kuwana iyo Saiti, kusanganisira iyo Inopindirana Nzvimbo, unobvuma kusaposita, kurodha ku, kuendesa, kugovera, kuchengeta, kugadzira kana neimwe nzira kuburitsa zvemukati izvo:
inoputsa kodzero yekodzero, yekutengesa, chakavanzika chekutengeserana kana imwe pfuma yepfuma kana kodzero dzevamwe;
inotyora zvakavanzika, kuzivisa kana dzimwe kodzero dzevamwe;
hazvisi pamutemo, zvounzenza, zvinoshoresa, zvinosarura, zvinonyadza, zvinonyadzisira, zvinonyadzisa, zvinoshusha, kutyisidzira, kushungurudza, kuvenga, kana kukurudzira hunhu hunogona kutorwa senge imhosva, hunomutsa mhosva yevagari vemo, kana kutyora chero mutemo mune chero nyika, kana iri neimwe nzira zvisina kukodzera, sekusarudzwa ne Motio mune kungwara kwayo chete;
inhema kana kuti haina kururama;
zvine hunyanzvi, zvinosanganisira pasina muganho, hutachiona hwemakomputa, mabhomba ane musoro, Trojan mabhiza, honye, ​​zvinokuvadza zvinhu, data rakashatiswa, kana imwe software yakaipa kana data rinokuvadza; kana
inogona kukuvadza Motio kana chero yekambani yemubereki, makambani ehanzvadzi, vanobatana, vashambadziri, vanobatsirana kana mamwe mapato.
Iwe haugonewo kushandisa nhema e-mail kero kana rumwe ruzivo rwekuzivisa, kuteedzera chero munhu kana chinzvimbo kana neimwe nzira kutsausa nezvekwakabva chero zvemukati. Iwe zvakare haugone kuisa zvebhizimusi zvemukati pane saiti.
If Motio inopa nzvimbo dzakadai dzeInopindirana, iwe ndiwe chete unokoshesa kushandisa kwako Nzvimbo Dzinopindirana uye unobvuma kudzishandisa nenjodzi yako wega. Iwe unopa Motio isingagumi, isingasarudzwe, yemadzimambo-isina, isina kumanikidzwa, yakazara zvakakwana, isina kuumbirwa uye kodzero yepasirese yekushandisa, kuteedzera, kugadzirisa, kugadzirisa, kubereka, kuratidza, kugovera, kushambadza, kushandura, uye kugadzira mabasa ezvitorwa kubva pane chero zvemukati, zvigadzirwa, makomendi. , kuraira, ratings, kutumira kana kutaurirana kunoitwa newe uye kunyorerwa paSiti kana chero inoenderana Saiti kune chero chinangwa. Iwe unoenderera uchibvuma izvo Motio yakasununguka kushandisa chero mazano, mazano, kuziva-kuti iwe kana vanhu vari kukumiririra vatipe kwatiri. Iwe unopa Motio neayo Affiliates kodzero yekushandisa zita raunotumira maererano nezvinhu zvakadaro, kana tichisarudza kudaro. Iwe unomiririra uye unopa warandi kuti iwe ive yako kana neimwe nzira kudzora kodzero dzese kune zvemukati kana zvinhu zvaunotumira kana neimwe nzira kuzviisa pasi Motio kana maAffiliates ayo; kuti izvo zvirimo kana izvo zvinhu ndezvechokwadi; kushandisa izvo zvemukati kana zvinhu zvaunotumira hazviputse chero gadziriro pano kana mutemo uye hazvizokonzere kukuvadza chero munhu kana sangano; uye kuti iwe uchapa mhosva Motio kune zvese zvirevo zvinobva pane zvemukati kana zvinhu zvaunopa.
Motio ine mvumo yekutarisa zvirimo mukati meiyi Nzvimbo Dzinopindirana, uye inogona kubvisa zvinhu kubva kuiyi Nzvimbo Dzinopindirana izvo iyo, mukufunga kwayo kwese, inoona seinopokana, isina kukodzera, kana kutyora Chibvumirano ichi, asi haina chisungo chekudaro. . Chero maonero, kuraira, ratings, kutumira, kana kutaurirana kunoitwa newe kana chero mumwe mushandisi mukati meInteractive Areas ("Comments”) Ndeavo emunyori akanangana uye haasi iwo mafungiro epamutemo e Motio. Motio zvinonyatsoregedza chero mutoro zvine chekuita neKupihwa maComment akaitwa newe kana chero wechitatu bato muInzvimbo Dzinopindirana uye zviito zvipi nezvipi zvinokonzerwa nekutora chikamu kwako munzvimbo Dzinopindirana. Iwe unowedzera kunzwisisa uye unobvuma kuti chero maComments aunotumira kune Anopindirana Nzvimbo dzeSiti zviri zveruzhinji, kwete zvakavanzika.
Nezve iyo inofambidzana yepamhepo yekutaura sevhisi yakaitwa kuti iwanikwe pane kana kuburikidza neSiti, hapana icho icho Motio inotaurirana kwauri maererano neyekutaura sevhisi ichaonekwa sechibvumirano chepamutemo, mumiririri kana waranti na Motio. Iri sevhisi rinopihwa kuti zvive nyore kukubatsira iwe mukunzwisisa Motio'' Zvigadzirwa, masevhisi uye / kana iwo ruzivo arimo kuSiti.
4.0 Isu Tine Hanya Nezve zvakavanzika uye Kuwana kune Dhata. Iyo Saiti iri pasi pemitemo nemamiriro ezvinhu akaratidzirwa muParagidhi Yedu. Nekuwana, kushandisa, kuwana, kana kutenga chero zvemukati, dhata, zvishandiso, ruzivo, zvigadzirwa kana masevhisi kuburikidza kana kubva kuSiti, unobvumidza kune izvo zvirevo uye mamiriro muParavheti Yedu, iyo inogona kuwanikwa pano: https://motio.com/privacy-policy. Ruzivo rwese rwevanhu rwunopihwa kuburikidza neSiti ino ruchabatwa zvinoenderana neSosi Yemukati Pakavanzika Mutemo.
5.0 Hapana Mahwendefa Emhando ipi neipi. Iyo Saiti, Zvese zvirimo PASITI, ZVESE ZVITATU CHEMA ZVAKAITWA ZVAKANYORWA PASITITI, UYE ZVESE zvigadzirwa nemasevhisi anopihwa pane kana kuburikidza neSiti zvinopihwa pane "sezvazviri" uye "sezviripo" hwaro, Pasina WARARITIYI DZENYU RUTSI RUNHU KUSINA KUTI ZVAKATAURWA ZVIMWE ZVIMWE. KUSHANDISWA KWAKO NESITI ZVINONYANYA PANGONI YAKO. Motio inoratidza pachena zvese zvivimbiso zverudzi rupi zvarwo, angave ari kutaura kana kurehwa, kusanganisira, asi zvisina kuganhurirwa kune, izvo zvinongedzo zvekutengesa, kugwinya kwechimwe chinangwa, zita, kusaputsa, uye kuchengetedzeka uye kurongeka, pamwe nezvivimbiso zvese zvinomuka kushandiswa kwekutengeserana, kosi yekubata, kana kosi yekuita, KUNE ANOGONESESA ANOGONESESESWA MUTEMO. PASINA KUSANGANISIRA YAKATSIGIRA, HERE MOTIO KUMASHURE MBERI VANODZIDZISA, MAGATSI, MAOFISI, VADZIDZISI, VAMUMWARI, KANA VANOTENDA, VANOGONESESA KUTI SITITI IZOZVIMBIDZWA, NGUVA, KUREZEKEDZWA, KANA KUTI ISINA KUMASHURE, KANA VACHIITIRA RITESI YEMAHARA, MITIZI RASITI , KUWANIKWA, KUGARA NENGUVA, HUNHU, HWAKAKWANA, CHOKWADI, KURARAMA KANA KUTI KUZADZISWA KWESAYITI, KANA ZVIDZIDZO NESHURE ZVINOTENGESWA KANA ZVAKAITWA NENZVIMBO YENYIKA. Motio haina waranti, uye inoratidza pachena chero chisungo, kuti: (a) SITITI KANA ZVIRI MUKATI zvichazadzisa zvaunoda kana zvichave zviripo zvisina kumiswa, nenguva, yakachengeteka, kana isina kukanganisa hwaro; (b) zvirimo KANA SITI ichave inoenderana, yakakwana, yakazara, yakajeka kana inoshanda kune ako mamiriro; (c) mhedzisiro inogona kuwanikwa kubva pakushandiswa KWENYU SITE kana chero ZVIMWE ZVINOGONESESWA KANA masevhisi anopiwa kuburikidza nenzvimbo ino achave echokwadi kana akavimbika; (d) kunaka kwechero zvigadzirwa, masevhisi, ruzivo, kana zvimwe zvinhu zvakawanikwa newe kuburikidza nesaiti izvi zvinosangana nezvako zvaunotarisira KANA ZVINODIWA; KANA (E) KUTI ZVINHU ZVAKANAKA KANA MASHURE KANA SITE ZVISINA MAVHURE KANA ZVIMWE ZVINOGONESA. ZVIMWE, MOTIO HAZVIMBIRIRE uye HAZVIMBONESWE NEZVAKANAKA KANA KUVIMBIKA KWENYANZVIMBO, MAZANO KANA KUTI CHITAMBO CHINOITWA NEVANOSHANDISA SITITI, KUNYANYA KUKOMEDZANA KANA KUSHANDISWA KWEMUSHANDI KWAKANYORWA KANA KUNOGONESESWA KUSI SITITI KANA KUNE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMWE. KANA UCHISAGUTSIKANA NESITITI KANA CHIMWE CHINOGONESESWA KANA MACOMENTI ANOGONESESWA KANA AKANZWISWA PAZVIMBO, KANA NEIYO YEMAZWI EMAZWI ANO, RAKO RAKASIYANA uye RINOGONESA REMEDI KUTI URI KUMISIRA KUZIVA NOKUSHANDISA SITITI. KUSHANDISWA KWAKO KWAVANHU VANOPIWA VEMATATU VANOPA uye VANOBATSIRA uye / KANA ZVINOGONESESWA KWAVO KANA MABASA NDEZVO ZVAKO ZVINOITIKA.
6.0 Kuganhurirwa kweMutoro. PASI PENYAYA DZINOGARA MOTIO KANA VASHANDI VAYO VANOREMEKEDZA, MAGENESI, MAOFISI, VADZIDZISI, VAMWARI, KANA VANOGONESESA VANE mutoro kana mutoro we (a) chero kukuvadzwa kune kana mavhairasi anogona kukanganisa komputa yako, zvishandiso zvemakomputa, zvifambiso zvekufona kana zvimwe zvinhu semhedzisiro yekushandisa kwako kwe kupinda kune ino saiti kana kudhawunirodha chero zvemukati kubva saiti kana (b) chero kukuvara, kufa, kurasikirwa, kuda, kuita kwamwari, tsaona, kunonoka, kana chero chaicho chakanangana, chakakosha, chemuenzaniso, chirango, chisina kunangana, chakangoitika yemhando ipi neipi (inosanganisira pasina muganho yakarasika purofiti kana kurasikirwa nemari), ingave yakavakirwa muchibvumirano, kutambudzwa, chisungo chakasimba kana zvimwe (CHIITIKO IF MOTIO WAKAYAMBISWA NEZVINOGONESESA ZVAKAKONZESA ZVAKAITIKA), izvo zvinobuda kana izvo ZVIRI munzira ipi neipi zvine hukama ne (i) chero kushandiswa kweSITI kana zvemukati, (ii) kukanganisa, kusiiwa, zvikanganiso, kukanganisa, kukundikana kana kunonoka (kusanganisira pasina muganho kushandiswa kana kusakwanisa kushandisa saiti, kana chero chinhu cheSITI kana kunonoka mukushanda kana kutapurirana kana kukundikana kwekuita kworudzi rupi zvarwo), kana (iii) mashandiro kana kusaitwa nesu kana chero mupi kana ANANGANISIRA . ZVINOTAURA ZVISITENDESE KUZIVISWA KANA KUSANGANISWA KWEZVINHU ZVAKAITIKA KANA KUTI ZVINOKOSHA ZVAKAITIKA, CHIMWE CHINOGONESESWA KUNE CHINHU CHINOGONESESWA CHINOGONESESWA MUTEMO. MUZVIITIKO ZVESE, DZIMWE DZIMWE DZIMWE DZIMA MOTIO Uye Chero CHIMWE CHIMWE CHINHU CHINOSANGANISWA mukugadzira, KUTONGA, KUGADZIRA KANA KUGADZIRA SITI, KANA ANE, ANOGONESEDZWA KUSVIRA $ 50.00.
7.0 Tibatsire isu kukubatsira iwe. Iwe unozodzivirira, kuripa uye kubata Motio neayo Affiliates, uye mumwe nemumwe wedu kana avo vatariri, vatungamiriri, vashandi, vamiririri, nemagweta, vasina kukuvara kubva nekupokana nechinhu chipi nechipi, chikonzero chezviito, mutoro, mari, kukuvara, kurasikirwa kana kudiwa, kusanganisira, pasina muganho, magweta ane musoro. 'mubhadharo uye mubhadharo wezvekuverenga, zvichibuda, kana neimwe nzira zvine chekuita nekutyora kweMitemo iyi kana zvibvumirano zvakaitwa chikamu cheiyi Mitemo nereferenzi, kana kushandisa kwako kana kupinda kuSiti.
8.0 Vedu Vakabatana. Motio'inoratidzira pane kana kuburikidza neSiti yezvigadzirwa kana sarudzo dzebasa dzinopihwa neVayo vanobatana hazvireve munzira ipi neipi, kuratidza, kana kuumba chero rutsigiro kana kubvumidzwa na Motio yeiyo Affiliates kana chero chekubatana pakati pechero yakadaro Affiliate uye Motio. MotioKuratidzwa kwechimwe chigadzirwa kana sevhisi sarudzo inopihwa neimwe kana yakawanda yevanobatana nayo hazviite kurudziro na Motio nezve icho chaicho chigadzirwa kana sevhisi sarudzo. Unobvumirana nazvo Motio haina kumbobvira yakonzeresa kururamisa, kukwana kwenguva kana kukwana kweruzivo rwainogona kuwana kubva kune Vayo vanobatana. Ruzivo urwu rwunopihwa kuti zvive nyore kwauri chete. Kudyidzana kwako nechero yeanobatana kunowanikwa kuburikidza kana kurehwa paSeti kuri panjodzi yako wega, uye unobvuma izvozvo Motio haazovi nemhosva maererano nezviito, kusiiwa, zvikanganiso, kumiririrwa, garandi, kutyora kana kuregeredza kwechero dzakabatana kana kukuvara, kufa, kukuvara kwepfuma, kana kumwe kukuvara kana mari inokonzerwa nekusangana kwako neVanobatana. Iwe unoenderera uchibvuma kutevedzera zvirevo kana mamiriro ekutenga akaisirwa neVanobatana vaunosarudza kuita navo bhizinesi.
9.0 Zvinongedzo kuTatu Bato Webhusaiti. Iyo Saiti inogona kunge iine zvinongedzo kune mamwe mawebhusaiti ayo Motio haichengetedze, muridzi, inoshanda kana kudzora, asi izvo zvinochengetedzwa, kuve kana kushandiswa nemapato asiri iwo Motio, kusanganisira, asi kwete kuganhurwa kune dzakabatana ("Dzimwe Websites"). Isu tinopa izvi zvinongedzo zveako mareferenzi uye zviri nyore uye haubvumire, kutora, kubvumidza kana kutsigira mamwe maWebhusaiti kana zvirimo zvirimo. Motio haitongi mamwe maWebhusaiti kana ruzivo rwuri pane mamwe maWebhusaiti uye harisi basa rezviri mukati maro. Motio pachena inoramba zvese zvinomiririrwa kana garandi maererano nezviri mukati kana kurongeka kwezvinhu zviri pane mamwe maWebsite. Kana iwe ukafunga kuwana chero eaya mamwe maWebhusaiti, uye uchisiya Saiti, unozviita zvachose panjodzi yako wega. Iwe unofanirwa kutarisa kune akasarudzika mazwi ekushandisa, zvakavanzika marongero, uye mimwe mitemo yakatumirwa kune Dzimwe Webhusaiti usati waishandisa. Unobvuma kusagadzira chinongedzo kubva kune chero webhusaiti, kusanganisira chero webhusaiti inodzorwa newe, kune ino Saiti.
10.0 Vashandisi Kunze kweUnited States. Kana iwe ukawana iyo Saiti kubva kunze kweUnited States, iwe unobvuma kuve neyako yega data kuendeswa uye kugadziriswa muUnited States. Ipo iyo Saiti ichiwanika pasirese, kwete zvese zvigadzirwa, masevhisi kana zvemukati zvinokurukurwa, zvakapihwa, zvinoratidzwa, kana kupihwa kuburikidza kana paSiti zvakakodzera kana kuwanikwa kuti ushandise kunze kweUnited States, uye Motio haimiriri pane izvi. Chero kupihwa kupi kwechigadzirwa, sevhisi kana zvemukati kuburikidza neSiti hazvina maturo panorambidzwa. Unobvuma kusashandisa iyo Saiti kana ukarambidzwa kugamuchira zvigadzirwa, masevhisi kana zvemukati zvinobva kuUnited States uye Motio inochengetera kodzero, mukufunga kwayo kwega, kudzikisira zvigadzirwa, masevhisi, kana zvemukati zvakaitwa kuti zviwanikwe paSiti kune chero munhu kana nzvimbo yenzvimbo. Kana iwe ukasarudza kuwana iyo Saiti kubva kunze kweUnited States, iwe unozviita wega uye une wega mutoro wekuteerera nemitauro yemuno inoshanda.
11.0 Kubata Chero Chirevo. Hapana chinhu muMitemo iyi chichafungidzirwa kana kunzi chinoumba chero sangano, kudyidzana, kudyidzana pamwe kana imwewo nzira yekubatana, basa kana hukama hwehukama pakati Motio uye iwe, uye hapana bato richava nemvumo kana mvumo yekubvumirana kana kusunga mumwe nenzira ipi neipi zvayo. Iwe haugone kugovera, kupa kana kuendesa kodzero dzako kana zvisungo pasi peMitemo iyi. Motio inogona kupa kodzero dzayo nemabasa pasi peMitemo iyi pasina kupihwa kwakadai kunoonekwa sekuchinja kuMitemo uye pasina ziviso kwauri.
Tinogona kushandura, kushandura kana kugadzirisa aya maMitemo kana yedu Yakavanzika Policy, chero nguva, uye mukufunga kwedu chete, nekutumira ziviso paSaiti mazuva makumi matatu (30) mazuva asati asvika iwo Mitemo yakadzokororwa kushanda. Kuwana uye kushandisa Saiti inotevera makumi matatu (30) zuva rekuzivisa nguva kunosanganisira kubvuma kwako uye chibvumirano chekusungwa neMitemo yakadzokororwa kana Yakavanzika Policy. Kana iwe ukaramba chero kupihwa kweMitemo iyi kana kumwe kuchinjika kunotevera kweMitemo iyi kana kusagutsikana neSiti ino nenzira chero ipi, nzira yako chete ndeyekugumisa nekumira uchishandisa Saiti.
Aya maMitemo, pamwe chete nezvibvumirano izvi zvakaita chikamu cheMitemo iyi nekureva kana kushandurwa, shanduko kana kugadzirisa, inoita chibvumirano chese pakati pedu chine chekuita nekushandisa kwako Saiti, uye chinotsiva chero kunzwisisana kwepamberi kana zvibvumirano (kungave kwakataurwa kana kwakanyorwa) maererano nekushandisa kwako Saiti.
Mitemo yeHurumende yeTexas (USA), zvisinei nekutonga kwayo kwemitemo inodzora, ichatonga Mitemo iyi, pamwe neyako nekuichengeta kwedu. Kana iwe ukatora chero matanho epamutemo ane chekuita nekushandisa kwako Saiti kana aya maMitemo, unobvuma kuisa chiito chakadai chete mudunhu nematare emubatanidzwa ari muDallas, Texas (USA). Masimba akasarudzika nenzvimbo zvine chekuita nekukakavadzana pakati pako na Motio ("Kurwisana”) Ichavata mumatare ehurumende ari kuDallas, Texas, kana mudare redzimhosva muNorth District yeTexas. Mune chero Kukakavara kwakadai kunotangwa na Motio, chete Motio anozove nekodzero yekudzosera mari dzese dzepamutemo dzakaitwa maererano nechinhu ichi, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa kumitengo, zvese zvinobhadhariswa uye zvisingabhadhariswe, uye mari inokodzera yemagweta. Iwe uri kuregerera chero kodzero yaungave nayo yekugadzirisa Gakava rakadai pane imwe kirasi chiito kana pane chero hwaro hunosanganisira zvirevo zvakaunzwa mumiriri wevanomiririra vanomiririra veruzhinji kana vamwe vanhu vakafanana.
Iwe unobvuma kuti iwe waverenga uye wanzwisisa Mitemo iyi, uye kuti aya maMitemo ane simba rakafanana uye anoita sechibvumirano chakasainwa. MotioKukundikana kuomerera kana kumanikidza kushanda kwakasimba kwechero kupihwa kweChibvumirano, chose kana chikamu, hakufanirwe kutorwa sekuregedza chero kupihwa kupi kana kodzero. Haisi iyo kodhi yemafambiro pakati pemapato kana maitiro ekutengeserana haazoite kushandura chero izwi kana kupihwa kwechibvumirano ichi.
Kana chero eemaitiro kana mamiriro echibvumirano ichi akanzi haachashandi, haamanikidzike kana kuti haashande, nechero dare rekutonga kana manejimendi masimba ane masimba akakwana pamapato uye mushure mekukwidzwa kwese kwapera, chirevo ichi hachizokanganisa. yasara mamiriro uye mamiriro echibvumirano ichi, icho chinoramba chakazara musimba uye nemhedzisiro.
12.0 Tiudze Izvo Zvaunonyatsofunga. Tinoda kuti iwe ugovane zvaunotaura uye mibvunzo nesu kuburikidza neSiti, asi ndokumbirawo ugare uchifunga kuti isu hatigone kukupindura panguva yakakodzera, uye kuti hatisungirwe kupindura kwauri. Ndokumbirawo ushandise chenjedzo usati waburitsa ruzivo kana zvinhu kwatiri kuburikidza neSiti. Iwe unosungirwa chero ruzivo uye zvinhu zvaunotumira kwazviri Motio. Ndokumbirawo musataure kana kuzivisa zvakavanzika zvekutengeserana kana rumwe ruzivo rwakavanzika kana rwekudyara kwatiri kuburikidza neSiti. Ndokumbirawo musataure pfungwa dzisina kukumbirwa kwatiri kuburikidza neSiti. Motio haitore basa rekudzokorora uye haizosungirwa kune chero munhu anozivisa pfungwa isina kukumbirwa Motio kuburikidza neSiti (semafungiro ezvigadzirwa zvitsva kana masevhisi, kushambadza mazano, kana rumwe ruzivo maererano nehunyanzvi kana zvigadzirwa zvine chekuita nazvo Motiobhizinesi). Motio Zvakare hazvisungirwe kuchengetedza pfungwa isina kukumbirwa zvakavanzika, kana kukubhadharira kuburitswa kwezano risina kukumbirwa kana rekusimudzira kana kushandisa iro risingabvunzwe. Motio zvakare haizovi nemhosva kune chero fanano pakati pezvayo zvichagadzirwa zvigadzirwa / masevhisi kana zvirongwa uye iwo asina kukumbirwa mazano. Kuti utaure nesu zvakare, unogona kutirovera runhare kuburikidza neinternet fomu iri pa https://motio.com/content/contact-us, kana tinyorere pa: Motio, Inc., ATTN: Webhusaiti Admin, 7161 Bishop Rd. STE 200, Plano, TX 75024.